UKUPHATHWA KWEZINDABA NEMFUMO: UMartin Vrijland
Ingxoxo: 'Ngaba i-DMT ilungile kuwe okanye akunjalo?' Le ndoda yabonakala ngokukhawuleza
Kufakwe kuyo UKUPHATHWA KWEZINDABA NEMFUMO, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	13 Agasti 2018	• 2 Comments
Nangona kwinqaku yam yangaphambili DMT, le into equlethwe ingcambu ezifana nokukhutshwa njengoko ayahuasca kunye iboga, Ubonise ukuba tune usebenziso transceiver kwi uSaturn ikhowudi, apho kubonakala zimpawu ukuze athontsize ephuma kubantu izinto eziveza ngokoqobo baqale ukubona usebenzisa ukusetyenziswa DMT. [...]
Kufakwe kuyo UKUBHALA, UKUPHATHWA KWEZINDABA NEMFUMO, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	8 Agasti 2018	• 9 Comments
Nangona ebuselula kakhulu ndaye ndaqonda ukuba ukholo lwungekho nantoni na onyana onothando, kodwa ngokuyinkoyiko yinkxalabo, iyandibuza ukuba iibhiliyoni zabantu zithathwa njani ngokwenkqubo yabo yokukholelwa kwaye zivumela ukuba ubomi babo buqulunqwe yiyo. Ngoku akukho kuphela ukholo kuThixo, Allah, uYesu, [...]
Imiphumo efana ne-ayahuasca ye-DMT kunye nomsebenzi we-pineal gland
Kufakwe kuyo UKUPHATHWA KWEZINDABA NEMFUMO	by UMartin Vrijland	6 Agasti 2018	• 5 Comments
Ndihlala ndinconywa ukuba ndizame into efana ne-DMT ngendlela ye-ayahuasca okanye ezinye i-DMT ezine-agents. Kubonakala ngathi le nto ishukumisa i-pineal gland, eyenza uhlobo lwamava okufa-futshane kunye nokuba neentlobo zonke ezivela kumzimba. Ngoku ndizame ezinye iziyobisi [...]
Kufakwe kuyo UKUBHALA, UKUPHATHWA KWEZINDABA NEMFUMO, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	5 Agasti 2018	• 6 Comments
Ingakumbi ukususela engile nabo inqubo lobuKristu okanye lobuSilamsi Kwakudla ukufumana lo mbuzo: Ukuba ucinga indalo sele kudale Ukulinganisa Luciferian, ngubani ke ngoko wadala ULusifa nendlela ngabo iidemon, djinns, archons? Ndinqwenela ukucacisa kweli nqaku yaye uya kuba ndiya apho [...]
Ingaba i-Google ye-anchor technique ye-Agrmented Reality (AR) ibonisa ukuba inkolelo yendalo iyimimiselo?
Kufakwe kuyo UKUBHALA, UKUPHATHWA KWEZINDABA NEMFUMO, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	5 Agasti 2018	• 4 Comments
Emva manqaku ezimbalwa ziye zabhalwa malunga umba othe wena kunye nam ubomi ngokoqobo enesiqhamo, kungqinwa izimvo ezininzi abafunda kakhulu uthuke. Ngenxa yokuba ndiphikisana ukuba umgaqo we-'minyum entanglement 'iyimfuneko efunekayo eyenza i-Einstein ingingqi kunye nejubane lokukhanya (njengomda wenyama ngokomzimba), [...]
Abantu abaninzi banokuqala ukubona ukuba siphila kwisimo sokulinganisa: kungenxa yoko
Kufakwe kuyo UKUBHALA, UKUPHATHWA KWEZINDABA NEMFUMO	by UMartin Vrijland	3 Agasti 2018	• 9 Comments
I-Rizwan ("Riz") Intsapho ngumrhwebi ophumelelayo, umtyalomali, umlobi othengisayo kakhulu, uvulindlela kwi-video ye-video kunye nomvelisi ozimelayo wefilimu. Ngamava akhe kwiimidlalo zevidiyo kwi-intanethi kunye nezifundo zakhe, phakathi kwezinye izinto, i-quantum physics kunye nemigudu yezenkolo, wafika kwisigqibo sokuba kusenokwenzeka ukuba siphila kwimidlalo yemidlalo ebonakalayo. [...]
Yintoni esinokuyenza ukusombulula iingxaki zethu? Isenzo spooky kude!
Kufakwe kuyo UKUBHALA, UKUPHATHWA KWEZINDABA NEMFUMO, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	1 Agasti 2018	• 4 Comments
Iividiyo ezi ngezantsi zibonelela ingqiqo encinane kwingcamango yokungqinelana kwamanani. Ukuguqulelwa kwesiNgesi kwale ngqungquthela ye-quantum. Ukuba ubukela le vidiyo engezantsi unokufumana uvakalelo oluncinane malunga neli gama lithetha ntoni. I-termum entanglement yelwimi iluncedo ukuqonda, kuba kwimbono yam ithetha kakhulu malunga nobukho bethu. Kwinqaku yam yangaphambili ndine [...]
Kufakwe kuyo UKUBHALA, UKUPHATHWA KWEZINDABA NEMFUMO, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	30 Julayi 2018	• 22 Comments
Ngaba wayesazi ukuba yonke into oyibona kuphela ibonakala xa ibonwa? Oku kubonisa uvavanyo oludala malunga nekhulu leminyaka elibizwa ngokuba yi-double slits (ukuvulwa ngokuphindwe kabini). Ama-physic physic ehlabathini lonke ayenze oku kuhlola ngamakhulu amaxesha, kuba kukhokelela ekungakholweni kwangexesha elifanayo ukumangalisa okukhulu. Kufumanisa ukuba [...]
Imifanekiso yomprofeti uMuhammad (uxolo lube phezu kwakhe) kunye nomncintiswano wekhathuni weGeert Wilders
Kufakwe kuyo UKUPHATHWA KWEZINDABA NEMFUMO, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	27 Julayi 2018	• 12 Comments
Ndiye ndaphawula kwiintetho zikaSheikh Imran Hosein, endikuthanda ukuphulaphula ngenxa yokuhlalutya kwakhe kwimbali kunye nemicimbi yangoku ngokumalunga neziprofeto zobuSilamsi, ukuba amaSulumane aphantse athethe igama lomprofeti u-Muhammad kwaye ukuba bayongeza isigwebo sonke. [...]
UYesu unguMsindisi wonk 'ubani ozinikela kuye! Okanye ngaba i-Islam kuphela yindlela yokwenene?
Kufakwe kuyo UKUPHATHWA KWEZINDABA NEMFUMO, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	26 Julayi 2018	• 48 Comments
Ndathunyelwa kwinqaku namhlanje malunga nokuxhatshazwa kwabantwana abancinci kunye neentsana ezazisetyenziswa kude kube yiminyaka ye80 ngaphandle kwe-narcosis, kuba inkqubo yeentlanzi yayingekaphuhliswa. Ndincoma ukuba ufunde le nqaku kuqala ngaphambi kokuqhubeka apha. Enyanisweni, kuthethwa ngengozi. Intlungu yokuqala [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.409.322